isivumelwano: i-samsung galaxy tab s3 9.7-intshi enebhokisi yekhibhodi ebiza iindleko ze- $ 500 kwi-b & h
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: I-Samsung Galaxy Tab ye-S3 9.7-intshi enebhokisi yekhibhodi ebiza iindleko ze- $ 500 kwi-B & H
Isamsung ilitshitshisile ixabiso lethebhulethi yayo yamva nje ephezulu, i-Galaxy Tab S3 9.7-intshi, nge $ 100. Isilayiti ngoku iyafumaneka nje nge- $ 499.99 kubathengisi abohlukeneyo eUnited States, nangona i-Galaxy Tab S3 yasungulwa nge $ 599.99 kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
Ukuba awukabinayo iapos; awukathathi ncedo kwesinye sezivumelwano ezininzi kwi Galaxy Tab S3 , nantsi enye into ebhetele kunayo nantoni na esiyibonileyo kude kube ngoku. Ngexesha elilinganiselweyo, i-B & H ithengisa iithebhulethi zeSamsung ngexabiso elifanayo le- $ 499.99 kodwa iphosa ikhibhodi yasimahla yokugubungela incwadi.
Inkqubo ye- ikhibhodi yokugubungela incwadi Ezi & apos zifumaneka simahla kwi-B & H zihlala zibiza i-130 leedola, ke wena uya kugcina imali engaphantsi kwe-230 yeedola xa uthenga iinyanda. Ngokwe-B & H, ukunyusa kuya kuphela ngoJulayi 8, ke useneentsuku ezimbalwa zokuthatha isigqibo malunga nokuba ungasisebenzisi isivumelwano.
Kwaye kufanelekile ukuba uqaphele ukuba inqwaba kunye neepos; ubukho obulindelweyo ngoku busetelwe kwiintsuku eziyi-7-14 zeshishini, ke ukuba uya-odola enye, kuya kufuneka ulinde ixesha elide ukuze uyifumane.
umthombo: I-B & H nge AndroidSoul
fumana into ngokhetho lwe-css
Ngaba i-Galaxy S21 Ultra yebhetri yakho ibufutshane xa usendleleni? Nantsi iapos; umtyholwa ...
Kukhutshwa i-beta ye-iOS 14.2; zithetha ntoni ezo zibane ziorenji kunye nohlaza kwisikrini sam se-iPhone?
I-Apple yenze phantse imali eninzi njenge-Samsung kunye neHuawei edityaniswe kwi-Q2 ngaphandle kwentengiso ye-iPhone esezantsi
Uhlaziyo lwe-29 kaSeptemba oluzayo kwiSuper Mario Run luzisa isimilo esitsha, umhlaba omtsha kunye ne-50% kwisivumelwano
Eyona iPhone 12 Pro Max isebenzayo kwiT-Mobile, Verizon, AT & T, BestBuy, okanye evuliwe
Fumana iSiriusXM yasimahla yesixhobo sakho se-iOS okanye se-Android ngoMeyi 15
I-HBO Max ngoku ifumaneka simahla nge-AT & T & s